Sawiro: Ergadii Maamulka Jubba ee ka qeybta ahaa shirka dib u heshiisiinta Muqdisho oo soo gaarey Muqdisho – idalenews.com
Sawiro: Ergadii Maamulka Jubba ee ka qeybta ahaa shirka dib u heshiisiinta Muqdisho oo soo gaarey Muqdisho
Ergadii ka socotey gobolada Jubooyinka iyo Gedo oo gaaraaya ilaa 100 xubnood in ka badan ayaa soo gaarey magaalada Muqdisho si ay uga qeyb galaan shirka dib u heshiisiinta wajigiisa koowaad loogu talo galey inuu ka dhaco magaalada Muqdisho, ka dibna lagu dhameystiro magaalada xarunta gobolka Jubbada Hoose ee Kismaayo.
Ergada shirka ayaa u badan hal dhinac oo uu maamulka magaalada Kismaayo arrimiya soo xulay iyadoo in badan oo beelaha ku nool goboladaas ay cabasho ka muujiyeen qaabka maamulka u soo xulay beelaha goboladaas.
Wafdiga gaarey waxaa sidoo kale ka mid ahaa hogaamiyaha maamulka Jubba Axmed Madoobe iyo saraakiil sare oo iyagu hogaanka maamulkaas si dadbac ula shaqeynaayey oo iyaguna ka qeyb noqonaaya ergada shirka. Waxaana wafuudaas oo idil garoonka diyaarada Muqdisho Airport ku soo dhaweeyey wasiir ku xigeenka wasaarada Warfaafinka C/shakuur Mire, waxaana la dejiyey hoteelo ay dowlada horey ugu sii diyaarisey.
Wasiir ku xigeenka wasaarada warfaafinta,boostada,isgaarsiinta iyo gaadiidka C/shakuur Cali Mire oo shir jaraa’id u qabtay warbaahinta ka dib markii ay soo dhameystirmeen ergada shirka ayaa sheegay in dhamaan ergadii ka qeyb gali lahayd shirka dib u heshiisiinta ay soo gaareen magaalada muqdisho, isagoo xaqiijiyay in shirka uu furmi doono berri haddi alle idmo.
Dhageyso: Shirka dhismaha dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Somalia oo si habsami leh uga socda Baydhabo, 20 cisho gudahoodna la dooran doono Madaxdii dowlad goboleedka KG,